FAA-3015CE / FAA-6020CE Full nakatona sy Exchange table Fibre Laser manapaka Machine - China Dongguan Glorystar Laser
FAA-3015CE / FAA-6020CE Full nakatona sy Exchange table Fibre Laser manapaka Machine
Machine amin'ny fifanakalozana latabatra sy Cover, dia afaka mamonjy fotoam-Loading fitaovana. Product Features ● tanteraka fefy manodidina ny famolavolana, hampihenana taratra tamin'ny laser ary tsy misy ratra mekanika. ● mandany ny exchangeable worktable mba hamonjy Loading sy mampidina entana avy ny fotoana, sy ny fahaiza-miasa mahomby chieve asa ambony. ● Avo indrindra-mitoto vary fitaovana sy ny fitaovana fitoeran'entana, ambony ambany tabataba sy marina tsara. Azo ampiharina be mpampiasa amin'ny orinasa isan-karazany ny vokatra vy toy ny orinasa fanodinana taratasy metaly, cookware sy ny amin '...
Machine amin'ny fifanakalozana latabatra sy Cover, dia afaka mamonjy fotoam-Loading fitaovana.
● tanteraka fefy manodidina ny famolavolana, hampihenana taratra tamin'ny laser ary tsy misy ratra mekanika.
● mandany ny exchangeable worktable mba hamonjy Loading sy mampidina entana avy ny fotoana, sy ny fahaiza-miasa mahomby chieve asa ambony.
● Avo indrindra-mitoto vary fitaovana sy ny fitaovana fitoeran'entana, ambony ambany tabataba sy marina tsara.
Tena ampiharina amin'ny taratasy isan-karazany fitaovana vy tsy fifandraisana haingana fanapahana, sokitra. ary atsofony, toy ny karbaona vy, Stainless vy, firaka, manganese vy poakaty, ny tafo, aliminioma, varahina sy vy sodina fanodinana, sns
Model FAA-3015CE / FAA-4020CE / FAA-6020CE
Laser fahefana 1000W HO 10000W (tsy voatery)
miasa faritra 3000 * 1500MM / 4000 * 2000MM / 6000 * 15000mm
Transmission maody Gear sy fitoeran'entana, Double mpamily
Previous: F-6018T Tube / Pipes Fibre Laser Cutter
Manaraka: Laser fibre nanapaka Machine amin'ny Exchange Table
1000w Fibre Laser manapaka Machine
3000w Fibre Laser manapaka Machine
700w Fibre Laser manapaka Machine Price
Carbon Steel Fibre Laser manapaka Machine
High Power Fibre Laser manapaka Machine
Iron Fibre Laser manapaka Machine
Metal Fibre nanapaka Laser Machine
Sheet Metal Fibre Laser manapaka Ma Chine
Steel Fibre Laser manapaka Machine